FAAYIDAA MOOTUMMAAN NAANNOO OROMIYAA MAGAALAA FINFINNEE IRRATTI QABU KABACHIISUUF DIRQAMA SEERAA MOOTUMMAAN QABU | A Bilingual and Comprehensive Gateway to Ethiopian Federal and State Laws
Mootummaan naannoliis ta'e kan federaalaa heera mootummaa kabajuu fi kabachisiisuuf dirqama kan qaban ta'uu Heera Mootummaa Itoophiyaa keewwata 9(2) jalatti tumamee jira. Tumaalee heerichaa isaan kabajuuf kabachisiisuu qaban keessaas tokko kan keewwata 49(5) heerichaa jalatti tumame dha. Keewwati kunis tajaajila hawaasummaa magaalaa Finfinnee keessatti kennamu ilaalchisuun; itti fayyadama qabeenya uumamaa (lafa, albuuda, kkf) magaalaa Finfinnee keessatti argamuu ilaalchisuun; hirmaannaa bulchiinsa Finfinnee keessatti BMNO qabaachuu qabu ilaalchisuun; fi dhimma kanaan wal-fakkaatan irratti faayidaan MNO faayidaalee inni argachuu qabuu fi hirmaannaan qabaachuu malu akka kabajamu qabu tuma.
Haa ta'uyyuu malee heerichi bara 1995 ALA erga tumamee kaasee hanga yoonaatti waggaa 23 oliif hin kabajamne hin kabachiifamnes. Wixineen seeraa yeroo darbe bahee tures heericha kan kabajeef hin kabachiifne waan tureef uummati mormee wixinichis sababa gaariin tumaa seeraa osoo hin ta'in hafeera. Hanga yoonaa turuun isaa olaantummaan seeraa kabajamaa kan hin jirre ta'uu kan agarsiisu yoo ta'u, kun akka itti hin fufneef tumaan heeraa faayidaan MNO Finfinnee irratti qabu kabajamuu qaba jedhu kun akka raawwatamu taasisuuf mootummaan dirqama heeraan qabu bahachuu qaba. Seerri kana raawwachiisuuf bahus faayidaa MNO qabaachuu qabu bu'uura heerichaan raawwchiisuun dabalata daangaa finfinnees adda baasuu qaba. Kunis dirqama mootummaa akka tahe beekuun dabalata nutis akka uummataatti heerri kana jedhu kun akka kabajamu gaafachuuf bu'uura heerichaa keewwata 9(2) dirqama lammummaatu heerichumaan nurra kaa'amee jira.